Belize dia miomana handray ny sambo fitsangatsanganana Carnival Vista | Vaovao momba ny dia any Belize
Vaovao momba ny dia any Belize • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovao momba ny dia an-tserasera • Vaovao momba ny indostrian'ny cruise • Vaovao momba ny indostrian'ny fandraisam-bahiny • Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena • Dia lavitra • Other • fanarenana ny dia • Naotin'i Resort • Vaovao momba ny fizahantany tompon'andraikitra • Vaovao momba ny fizahantany • Dinika fizahan-tany • Vaovao momba ny fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Tsiambaratelo momba ny dia • Travel Wire News
Home » Lahatsoratra » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovao momba ny dia any Belize » Belize dia miomana handray ny fitsangatsanganana an-tsambo Carnival Vista
Ny Carnival Vista dia hiasa miaraka amin'ny 95 isan-jaton'ny mpandeha farafaharatsiny ary ny ekipany rehetra dia vita vaksiny, ary hisy ny masontsivana henjana ho an'ireo mpandeha nidina.
Belize dia handray an'i Carnival Vista any Belize City amin'ny 7,2021 Jolay
Hiainga ao Galveston, Texas i Carnival Vista
Carnival Vista no sambo voalohany niantso an'i Belize hatramin'ny nahantona ny indostrian'ny fitsangantsanganana efa herintaona lasa izay
Belize dia miomana handray Carnival Vista, izay iasan'i Karnavalin'ny Cruise Line, mankany Belize City amin'ny 7,2021 Jolay. Hiainga avy ao Galveston, Texas ny sambo, ary izy no sambo voalohany niantso an'i Belize hatramin'ny niato ny indostrian'ny fitsangantsanganana an-tsambo teto amintsika efa herintaona lasa izay. Vaovao mampahery ho an'ny belizianina an'arivony miasa amin'ny sehatry ny fizahan-tany ity izay manantena ny handray ireo mpitsidika fitsangantsanganana an-dranomasina indray.
Ny fahasalamana sy ny fiarovana ny belizianina sy ny mpitsidika no zava-dehibe indrindra rehefa miverina ny fizahan-tany fitsangantsanganana. Ny Carnival Vista dia hiasa miaraka amin'ny 95 isan-jaton'ny mpandeha farafaharatsiny ary ny ekipany rehetra dia vita vaksiny, ary hisy ny masontsivana henjana ho an'ireo mpandeha nidina. Ireo kaody momba ny fahasalamana sy fiarovana izay navoakan'ny Belize Tourism Board (BTB) tato ho ato dia hitarika ny fandefasana indray ny sambo fitsangantsanganana any Belize. Ireo protocole ireo dia mamaritra ny fanitsiana ilaina sy ny fanovana tokony hatao isaky ny dingana amin'ny tsangatsangana fitsangantsanganana - manomboka amin'ny seranana an-trano, hatrany amin'ny toerana aleha sy fiverenana. Eo ambanin'ireny protokolola ireny, izay manaraka ny torolàlana Centers for Disease Control, satria sambo vita vaksinina feno io dia tsy tokony hampiharina ny baomba mandehandeha. Ireo mpandeha fitsangantsanganana dia avela handeha amin'ny fitsangatsanganana misy fitarihana sy an'ny tena ary ny asa neken'ny Gold Standard dia avela hanome serivisy an'ireo mpandeha ireo.
Mba hahazoana antoka fa ny sehatry ny fizahan-tany dia voaomana tsara hanomezana traikefa azo antoka sy azo antoka ho an'ireo mpandeha, ekipa ary ny toerana haleha, ny BTB dia hanolotra fotoam-pampiofanana an-tserasera mandritra ny herinandro vitsivitsy.
Ny mpandray anjara amin'ny sehatry ny fizahantany dia ampirisihina hanaraka ny fampahalalana tena izy momba ny antso an-tsambo mankany Belize Ports amin'ny alàlan'ny BTB Cruise App satria miova isan'andro ireo.
Ny BTB sy ny Ministeran'ny Fizahan-tany & Fifandraisana Diaspora dia manolo-tena amin'ny famerenana amin'ny laoniny tanteraka ny indostrian'ny fitsangantsanganana ho an'ny isa mialoha ny COVID, ary hanatsara ny vokatra fizahan-tany Belize hampifaninana azy bebe kokoa ao amin'ny faritra.